Ewe, siyazi umyalelo ophezulu weeholide zasehlotyeni: ulusu kufuneka "lukhulule" kwizonyiso. Kodwa ngamanye amaxesha kufuneka uphule imithetho. AmaStylisti acetyisa ukwenza oku ngokufanelekileyo: landela iziphakamiso kunye nolwakhiwo lolwandle lwakho aluyi kudumala.
Umgaqo wokuqala ukhuseleko kuqala. Nangona uya kusebenzisa i-tonal basis - ungayikhohlwa malunga nohla lweSanskrit ne-SPF engekho ngaphantsi kwe-30: kuya kudala umqobo ongenakubonakali kodwa oqinileyo we-ray. Ukugubha ukucaphukisa, ukumnyama kunye nokuguquka, sebenzisa i-correction mass, kwaye unike isikhumba esilungileyo kunye nesicatshulwa-iimveliso ezisekelwe kumanzi ezikhanyayo. Uyenze kakuhle ngomsebenzi ofanayo, i-toning fluid, i-emulsions kunye ne-shusheni.
Umgaqo wesibini ubonakalisa amaconsi kunye ne-eyelashes. Imfihlo iyayaziwa nayiphi na i-fashionista: i-mascara namanzi angenawo amanzi. Naka ingqalelo kwiimveliso zephambili-i-gels eziqhubekayo kunye neengqungquthela: iilishi ezichazwe kakuhle kwaye zilungiswe kakuhle zikhupha isidingo sokudaya i-eyelashes yakho, kwaye kwezinye iimeko-zithathe indawo kunye nonke. Fumana i-spray-retainer kwibhotile ehambelanayo: ayithathi indawo enkulu kwibhantshi yasebhantsini, kodwa udla ngokuzibonga ngokubona kwakho.
Imithetho emithathu - ukuvakalisa ukuvakalisa. Nika okukhethiweyo kwiintsimbi ezintle: i-balm epholileyo okanye ekhanyayo, kufuphi nombala wendalo wemilomo, i-shades okanye i-gels. Khetha i-cream ye-coral okanye umthunzi we-peach okanye i-hailer yomzimba ene-shimmering - ezi zixhobo zenza umthunzi ngokukhawuleza kwaye zifake ukutshaya kumfanekiso.
Njengokuba kunjalo, ukusuka kwizona zinto zithobekileyo zaba ibhobho yesondo
Elixesha elifanelekileyo lokunakekelwa kwesikhumba
Ubundlobongela kunye nobulili
Iipropati zokuphilisa izitshizi ze-viburnum
Indlela yokuhamba ngokuchanekileyo
Uneminyaka emininzi ongayihlamba imilenze yakho?
Iifatates ezibhakabhaka ezityiweyo kunye nebhekoni kunye noshizi
I-Pita isonka esivela kwi-pita isonka kunye ne-shrimps kunye ne-tofu
I recipe ye "Salsa"
Isigubhu saseTurkey ngegalikhi kunye ne-rosemary
Naziphi iipenki zethu: iingubo ezimnandi zomtshato kunye nemikhono
Ukuxhomekeka kweengqondo kwizinto zokuthenga kunokuthenga into efana neyonyango
Indlela yokupenda ibhatyi lesikhumba
Iklabishi exutyweyo ihamba ngokutya kunye nelayisi